Cali Gacal oo ku guuleystay guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Cali Gacal oo ku guuleystay guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug “SAWIRRO”
Cali Gacal Casir oo u taagnaa xilka Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa ku guuleystay doorashadii maanta oo ay ku tartamayeen ilaa iyo saddex musharax, waxaana uu noqday guddoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Galmudug.
Musharaxiinta u tartamayay doorashada ayaa kala ah Cabdullaahi Maalin Gaafow iyo Cali Gacal Casir, kuwaasoo aad isugu dhowaa wareegii koowaad, waxaana uu Cali Gacal Casir helay codad dhan 48 cod, sida uu ku dhawaaqay guddiga doorashada, halka musharaxii kale ee la tartamayay Cabdullaahi Maalin uu isna helay 36 cod.
Xildhibaanada Baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka kooban 84 Xildhibaan, iyadoo aqlabiyada ugu badan ay siiyeen Cali Gacal oo wareegii hore loogaga horeeyay.
Waxaana hada loo gudbi doonaa doorashada guddoomiye ku-xigeenada, si loo soo gabo gabeeyo doorashada guddoonka baarlamaanka Dowlad goboleedka Galmudug.
Wasiirka Arrimaha gudaha “Dhismaha dowlad goboleedka Galmudug, guddoomiyaha cusub ayay ku wareegtay”